Colombia: Mahavita Lahatsary Iray Isan’andro Ireo Bilaogeran-dahatsary Tamin’ny Taona 2010 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Febroary 2018 7:26 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, 简体中文, 繁體中文, Español, Italiano, English
Tamin'ny faran'ny taona 2009, nisy hetsika iray mahaliana tao Kolombia, raha nanolo-kevitra i Juan Falla, bilaogera mpamoaka horonantsary fa mamorona lahatsary iray isan'andro mandritra ny taona 2010 ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina bilaogin-dahatsary. Nampahafantarina tamin'ny alalan'ny vondrona Google antsoina hoe Vlogolombia / Mpamokatra Lahatsary Ao Kolombia [es] ny hevitra ary nahazo valiny avy hatrany. Maro ireo nanatevin-daharana ilay tetikasa, ka manome aina ny dingana.
OccioTV [es], gazetiboky nomerika natokana ho an'ny fampiofanana amin'ny alalan'ny horonantsary, manoratra momba ny fizotran'ny andro voalohany amin'ny taona:
Nisy ireo bilaogera sasany mpamoaka lahatsary izay nandray anjara tamin'ny hetsika ka nanao bilaogin-dahatsary isan'andro mandra-pahatapitry ny taona 2010, amin'ny teny hafa, votoaty 365 mandritra ny taona, ary natombok'i @@juanfallaesp. Avy eo narahan'i @alejandroangel, @albornoz, @fabricadecosas, @cafeycassette, ary koa vehivavy roa @ErikaPao sy @Luisasantiago, ary tamin'ny fotoana nanoratana ny lahatsarotra, tsy fantatray ireo hafa nandray anjara ihany koa…
Nisy fiantraikany tahaka izany teo amin'ny tetikasa ka manazava ao amin'ny Twitter ankehitriny i Ana Valleja, izay tsy nandray anjara tamin'ny tetikasa voalohany fa te handray anjara izy. Nampiditra ny lahatsariny voalohany antsoina hoe Mandehandeha amin'ny Fahrenheit 451 izy no sady mamaky andalana fohy avy amin'ny bokin'i Ray Bradbury.
Nanampy teny vitsy tao amin'ny bilaoginy mikasika ny lahatsary ihany koa izy:
Indraindray, afaka mivezivezy ny olona sady mipetraka ambony seza. Boky an-tanana. Mety ho pikantsary nampiasaina imbetsaka izany, saingy mba hananana boky an-tsaina, teny aorian'ny asa, no fitsangantsanganana na horonantsarimihetsika tsara indrindra, sion-dresaka miely ato an-tsaiko rehefa eo amin'ny tendron'ny lelako, ao amin'ny hozatry ny atidohako ilay tantara. Fahrenheit 451, ilay dia manavatsava ilay tsy tena tontolo an'eritreritra, toerana mampidi-doza kokoa ny boky ka mahatonga ireo mpamono afo, raha tokony hamono ny afo, dia mandoro boky hiarovana ilay olona maoderina amin'ny tontolo hafa mety hisy, amin'ny hevitra mampidi-doza, mahafinaritra na revolisionera.
Mitsangana ao Colombia ankehitriny ny bilaogeran-dahatsary mamoaka lahatsary iray isanandro mandritra ny taona. Mampiditra ny heviny ireo mpandray anjara sy mpanjohy mba hanampy amin'ny fikarakarana ny dingana. Alejandro Angel manoratra fa tokony hampiasa ny tenirohy #vlog365 ny mpandray anjara sy ny mpanjohy:
Ka ny fanontaniana dia: ho taona ho an'ny bilaogin-dahatsary ao Kolombia ve ny taona 2010? Efa nandefa ny teny fampaherezana voalohany ny mpampiasa twitter toa an'i Mauricio Gonzalez (@mauricioweb):
Fankaherezana ho an'i @Luisasantiaga @ErikaPao @alejandroangel, tsy maintsy be herim-po sy manana fientanam-po be vao afaka manao horonan-tsary 365 ao anatin'ny taona.
Ho an'ireo maniry hahita ohatra hafa amin'ny horonantsary avy amin'ny Vlog 365, mampiseho dia vao haingana manerana ny araben'i Ciudad Bolívar amin'ny môtô mba hividy ny sasany amin'ireo empanadas tiany indrindra ity horonantsary vao haingana avy amin'i Juan David Escobar, iray amin'ireo bilaogeran-dahatsary manao horonantsary iray isan'andro.